Zvokuchenesa Zvigadzirwa Vagadziri - China Zvokuchenesa Zvigadzirwa fekitori & Vatengesi
Yakachena imba Aluminium Mbiri
Horizontal Kuyerera Kwakachena Bhenji
Magetsi Kiya Pass Pass Mabhokisi
Anoshanda asati apinda mukamuri yakachena, mweya wakachena unoshandiswa kufefetera guruva rinonamira kumeso kwenguo dzake, kuitira kudzivirira guruva kubva mushower yemhepo uye kudzikisa mutengo unoshanda wemba yekuchenesa zvinobudirira. Nekuitwa kweakaviri-masuo fan anopindirana kuburikidza neyekufema-magetsi magetsi, inobvumidzwa kugadzirisa iyo nguva yemhepo yekugeza, kupinda otomatiki kutanga kumusoro. Iyo imwechete unit inogona kushandiswa, kana mauniti akawanda anogona kuunganidzwa kuti abatanidzwe ku ...
Rabbet Rudzi rweGirazi Magnesium Laminboard
Rabbet mhando Girazi magnesium laminboard. Inobudirira upamhi: 1150mm Ukobvu: 50mm-150mm (zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi) Kureba: Inoitwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vekupedzisira uye chirongwa chinodiwa. Core zvinhu: Girazi magnesium isina mhango, girazi magnesium dombo mvere, girazi magnesium furo, girazi magnesium aluminium zinga, girazi magnesium bepa rehuchi. Erection chimiro uye chishandiso: Rabbet mubatanidzwa. Inoshandiswa zvakanyanya mu: Indoor uye yekunze mabhodhi ekuchenesa fekitori kuvaka ...
Kurapa Kwemhepo Inodzivirira Musu weKamuri Inoshanda
Feature Iyi nhevedzano yedhivha dhizaini zvinoenderana neGMP dhizaini uye chengetedzo zvinodiwa. Iyo tsika yakasarudzika musuwo uye dhizaini yekuvhiya chipatara nzvimbo, chipatara wadhi nharaunda, kindergarten. Sarudza yakakwira kushanda mushe brushless DC mota ine diki saizi, hombe simba, yakaderera ruzha uye hupenyu hwakareba. Yakakwira mhando yekuisa chisimbiso gasket yakashongedzwa yakakomberedza shizha remukova, padyo nemusuwo wesuo pawakavharwa, uine mweya wakanaka. Type sarudzo Mhando yesarudzo Sandwich pani Handicraft pani Wall musuwo ukobvu (mm) ...
Rurimi uye Groove Type Hollow Core MGO Board
Iyo yepamusoro iri yepamusoro giredhi repolyester, PVDF polyester uye fluororesin pendi. Chiso chesimbi jira chinogona kushandiswa kwakakurisa jira, # 304 simbi isina chinhu sheet, aluminium-magnesium-managanese sheet uye aluminium alloy sheet. Saka ine yakanaka anti-ngura, acidproof, anti-crak, thermostability uye kuchembera kuramba. Izvo zvakakosha zvinhu ndeye A-kirasi murazvo unopikisa (kunze kwepepa zinga reuchi). Iko hakuna kunyunguduka panguva yekutsva kana kupisa kwakanyanya kuora kunodonhedza. Sekutanga chigadzirwa chigadzirwa iwe ...
Vertical Kuyerera Kwakachena Bhenji
Mhepo yakatwasuka yakachena bhenji inotora chimiro chekuyerera kwemweya musimboti yekuchenesa yakatwasuka imwe-nzira kuyerera, iyo inosanganisa yakaderera-ruzha centrifugal fan, yakamira yekumanikidza kesi uye yakanyanya kushanda firita mune imwechete unit chimiro. Ichi chigadzirwa chinogona kutora bhenji rinoparadzanisa kuti ridzikise maitiro ne vibration.Iyo mhando yemidziyo yekuchenesa mweya inopa yakasimba kuita kwakawanda kwenzvimbo yakakwira-yakachena nharaunda.Kushandiswa kwechigadzirwa ichi kunogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu, kusimbisa ...
Laminar pass-bhokisi rinoshandiswa pazviitiko zvekurambidza hutsanana kudzora, senge Center for Decease Prevention, bio-pharmaceuticals, sainzi yekutsvagisa institution. Icho chigadzirwa chekuparadzanisa kudzivirira muchinjikwa kusvibiswa kwemhepo pakati pemakamuri akachena. Anoshanda musimboti: pese pese musuwo wepazasi giredhi yakachena-kamuri yakavhurika, yekupfuura-bhokisi ichaenda kuendesa laminar kuyerera uye kusefa mweya inovhuvhuta zvikamu kubva munzvimbo yekushandira mhepo ine fan uye HEPA, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti mweya wepamusoro giredhi yakachena-kamuri iri kwete co ...
Negative Kumanikidza Kuyera Booth
Negative kumanikidza yairema dumba chinhu chemuno chakachena michina, iyo inonyanya kushandiswa mumishonga kuenzana kuyerwa uye sub-kurongedza kudzivirira hupfu hwekurapa kubva pakupararira kana kusimudza, kuitira kudzivirira inhalation kukuvadza kwemuviri wemunhu uye kudzivirira kuyambuka kusvibiswa pakati pebasa-nzvimbo uye imba yakachena. Anoshanda musimboti: filtrated inofefeterwa nemhepo inodzika kubva kune yekushandira mhepo ine fan, yekutanga kugona firita, yepakati kunyatsoshanda firita uye HEPA, yakaipa kumanikidza inorema dumba inopa vert ...
Yese Simbi Laboratory Bench
Iyo kabhodhi muviri weAll Steel Laboratory Bench yakanyatsogadzirwa neyakaomeswa-yakakangwa simbi machira kuburikidza nhevedzano yezvakaomarara maitiro ekuveura, kukotama, kutenderera, kudzvanya uye kupisa uye kuburikidza ne epoxy upfu ngura-kuramba kurapwa. Iyo haina mvura, bacteriostatic, uye iri nyore kuchenesa.